Teraka Volana Desambra ve i Jesosy? | Ampianarina
Hifidy fiteny Malagasy Hiditra (opens new window)
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Ateso Aymara Bambara Baoulé Basque Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Afovoany Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guna Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kabyle Kalenjin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Laosianina Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mende Mingrelian Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niue Norvezianina Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Arabo) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Touva Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Teraka Volana Desambra ve i Jesosy?
TSY milaza ny Baiboly hoe oviana i Jesosy no teraka. Misy porofo manamarina anefa ao hoe tsy volana Desambra izy no teraka.
Eritrereto ny toetrandro tany Betlehema, tamin’io fotoana io. Nangatsiaka sy nanorana ny andro, nandritra ilay volana jiosy atao hoe Kisleo (Novambra/Desambra). Nanarakaraka azy io ny volana Tebeta (Desambra/Janoary). Io no volana nangatsiaka indrindra tao anatin’ny taona, ary nisy lanezy mihitsy aza indraindray teny an-tendrombohitra. Hojerentsika izay lazain’ny Baiboly momba an’izany.
Nilaza i Ezra, mpanoratra Baiboly, fa matetika no nangatsiaka sy nanorana ny volana Kisleo. Nisy vahoaka nivory, ohatra, tao Jerosalema “tamin’ny faharoapolon’ny volana fahasivy”, izany hoe volana Kisleo. Nilaza i Ezra fa ‘nangovitra izy ireo satria avy ny orana.’ Niteny mihitsy aza ny vahoaka hoe: “Fotoanan’ny orana izao, ka tsy vitanay ny mijoro etỳ ivelany.” (Ezra 10:9, 13; Jeremia 36:22) Tsy mahagaga àry raha tsy nijanona tany an-tsaha tamin’ny alina ny mpiandry ondry sy ny bibiny tany amin’io faritra io, rehefa volana Desambra!
Milaza anefa ny Baiboly fa niandry ny ondriny tany an-tsaha ny mpiandry ondry, ny alina nahaterahan’i Jesosy. Nilaza i Lioka, mpanoratra Baiboly, fa ‘nitoetra tany an-tsaha ny mpiandry ondry tamin’ny alina, niambina ny andian’ondriny’ tany akaikin’i Betlehema. (Lioka 2:8-12) Tsy hoe nandehandeha tany an-tsaha fotsiny izy ireo, fa nitoetra tany an-tsaha mihitsy niaraka tamin’ny ondriny tamin’ny alina. Hanao an’izany amin’ny volana Desambra ve izy ireo, nefa mangatsiaka sy manorana tany Betlehema tamin’izany? Mazava ho azy fa tsia. Tsy volana Desambra àry i Jesosy no teraka, raha jerena ny zava-nisy tamin’ny fotoana nahaterahany. *
Lazain’ny Baiboly mazava hoe oviana i Jesosy no maty. Tsy miresaka firy ny fotoana nahaterahany kosa izy io. Mampahatsiaro an’izao tenin’i Solomona Mpanjaka izao izany: “Aleo laza tsara toy izay menaka manitra, ary aleo ny andro ahafatesana toy izay ny andro ahaterahana.” (Mpitoriteny 7:1) Izany no mahatonga ny Baiboly hitantara ny fanompoan’i Jesosy sy ny nahafatesany amin’ny an-tsipiriany, fa zara raha miresaka ny fotoana nahaterahany.
Niambina ny ondriny tany an-tsaha ny mpiandry ondry ny alina nahaterahan’i Jesosy
^ feh. 1 Ahitana fanazavana fanampiny ny pejy 195-198, amin’ny boky Fandresen-dahatra Miorina Amin’ny Soratra Masina, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no tsy manao Krismasy?
Be dia be no mankalaza Krismasy, na dia fantany aza hoe avy amin’ny mpanompo sampy io fety io. Nahoana kosa ny Vavolombelon’i Jehovah no tsy manao Krismasy?
Hizara Hizara Teraka Volana Desambra ve i Jesosy?